Birdie: AI-Na-akwagharị Achọpụta Ahịa | Martech Zone
Okpukpo oku nke ihe omuma nke ndi mmadu nwere ike inye bu ihe adighi edozi ma sie ike inweta ozi bara uru site na ya naenweghi udiri omuma. Birdie na-eme ka nde kwuru, nyocha, na mkparịta ụka ndị ọzọ dị n'ịntanetị gbanye, nghọta ndị na-azụ ahịa nke na-enyere ndị ahịa aka ịme mkpebi ọsọ ọsọ ọsọ.
Birdie bu uzo izizi zuru oke nke AI nke dabere na AI (IaaS) nke enyere iru CPG dika Samsung na P&G ighota uche nke otutu nde ndi ahia, igbanwe data nke edozighi n'ime ihe nghota.
Site n'iji AI na nhazi asụsụ eke, Nke a bụ video nke ahụ na-akọwa otú Birdie dị ịmaliteghachi nyocha ahịa.
Ugbua, ndị na - eduzi ụdị ahịa ụwa na CPG dịka Samsung na P&G na - eji ikpo okwu Birdie ịkọ ọdịnala ụdị, ịtụ anya ọgba aghara ngwaahịa, na ịchọpụta ohere nkwado na ọwa ahịa ndị isi, usoro nke ọrịa COVID-19 gbasoro ọsọ ka a na-amanye ụdị. mepee ọwa ahịa ọhụụ ma ọ bụ ghọta mgbanwe mgbanwe omume ndị ahịa na ọwa ndị dị ugbu a.
Ihe ngwọta Birdie na-enyere ụlọ ọrụ aka ịghọta ahụmịhe ndị ahịa ha, na-ewepụta Amamihe Ndị Ahịa enwere ike iji ya gafee ọtụtụ mpaghara ụlọ ọrụ gị.
Amamihe Ndị Ahịa - Na-agagharị site na ọtụtụ ijeri data ndị na-azụ ahịa sitere n'ọtụtụ ebe a haziri ahazi n'ụzọ na-eme ka ịchọta ihe ọzọ na-esote ma gbanwee nghọta ahụ n'ime ihe na-enweghị isi, na-eme ka ọ dịkwuo mfe iji gosipụta ROI nke Ndị Ahịa. Ihe omuma sitere na Birdie ruru 65% ngwa ngwa karia nyocha ahia ahia.
Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa - Gụọnụ ma ghọta otú ndị otu na-ahụ maka ndị ahịa gị si arụ ọrụ ma e jiri ya tụnyere ndị isi asọmpi na ọbụlagodi ndị mmekọ dị mkpa, ma mụta ka Ahụmịhe Ndị Ahịa gafere ọwa dị iche iche site na nyocha nke AI nke data-nke ndị na-azụ ahịa. Nnyocha nnụnụ nwere ike ịgụnye 100% nke ọwa na ozi.
Ahịa & Nkwukọrịta - Chọpụta ndị na-ege ntị na ngwaahịa ha kachasị amasị ha, njirimara ngwaahịa, na ọwa iji mee mkpebi ịzụta ha. Nyochaa ike gị na adịghị ike ndị asọmpi gị iji mepụta mkpọsa ahaziri iche iji gbanwee ndị ahịa ndị ọzọ. Ndị ụlọ ọrụ na-eji Birdie na-enweta ntụgharị 3x dị elu site na mkpọsa ahaziri iche
Innovation & Mmepụta Ngwaahịa - Nweta ihe ndị ahịa na-amasị na nke na-adịghị amasị banyere nkọwa zuru oke nke ngwaahịa gị - na ndị asọmpi gị, site na nkwakọ ngwaahịa iji detụ ire. Mụta ihe ha chere na-efu n'ahịa ma wepụta ngwaahịa ndị na-aga nke ọma. Ndị ụlọ ọrụ na-eji Birdie iji belata oge Innovation oge site na 1/4.
Kpughee Ike nke AI ma gafee Market Research iji nweta miri emi, granular data banyere ihe ndị ahịa na-eche banyere akara gị, ngwaahịa, ọrụ, na ndị asọmpi iji chọpụta ngwa ngwa na mepụta ohere uto.
Mụtakwuo Ihe Birdie Ngwọta
Tags: ainnụnụnghọta ndị ahịaihe omumu ohurunghọta dị ka ọrụnchọpụta ahịammepe nke ngwaahịa